Agenda yekugadzirira kupikisa kwakabudirira muna 2022 UCHAPEDZA! | Kuumbwa uye kudzidza
Iwe wafunga dzidza anopikisa. Saka isu tatova nepfungwa yakajeka nezveramangwana redu. Asi ikozvino kunouya chimwe chikamu chakakosha icho kusarudza imwe. Isu tinofanirwa kunzwa iko kushevedzera kunotitaurira iro bazi rekutora. Pamusoro peizvi, funga nezvemazita emazita atinawo, nekuti sekuziva kwedu, ndicho chimwe chezvinhu zvikuru zvinodiwa.
Kana tangova nepfungwa kupikiswa kwatinoda kana kunotikurudzira, tinofanirwa kutenga ajenda. Tinogona kuibata izvozvi, saka pazasi iwe unowana iyo syllabi yemakwikwi emakwikwi ane mikana yakawanda yemabasa pari zvino.
Makwikwi mazhinji akadaidzwa
Vanodzima Moto Vanopikisa
Fire brigade ajenda
Civil Guard kupokana
Civil Guard ajenda
Civil Guard kupokana: Imwe yemakwikwi anonyanya kudiwa ndeyeVarindi veVanhu. Iwo ekuchengetedza mauto anogara ari pakati peanonyanya kukumbirwa. Mimwe bvunzo dzekukwikwidza idzo dzinonyanya kudikanwa kuve nedhigirii reESO, kuve nemakore gumi nemasere uye usapfuure makore makumi mana. Bvunzo dzako dzakakamurwa kuita bvunzo dzemuviri (kumhanya, kutsungirira, kushambira ...) uye chikamu chedzidziso (Chiperengo, mutauro , psychotechnics uye yemunhu bvunzurudzo).
Kupikiswa kweVadzimi vemoto: Kuti utore bvunzo dzekudzimisa moto, unoda degree reBachelor kana zvakaenzana, pamwe nekuve nemakore gumi nematanhatu. Bvunzo iri rinoumbwa nechikamu chedzidziso uye chikamu chinoshanda (kukwira tambo, kusimudza huremu, kusundidzira-kumhanya, kumhanya, kushambira nekusvetuka kwekumira) Iyo psychotechnics uye kuongororwa kwechiremba kunopedzisa zvikamu zvinofanirwa kukundwa. Paunenge uchinge wawana nzvimbo yako, iwe uchaita akasiyana akasiyana mabasa senge kubuda, kukurumidzira kana kudzima moto.
Kupikiswa SAS (Andalusian Hutano Service): Pano tichava nenzvimbo dzinoverengeka uye chimwe nechimwe chazvo chichava nezvavanoda muchimiro chemadhigirii. Pakati pavo vese tinoratidzira manejimendi, akarongeka, nyanzvi dzefamasi kana physiotherapists, pakati pevamwe. Kana iri bvunzo, ichave iine chikamu chedzidziso uye kosi inoshanda, pasina kukanganwa chikamu chemakwikwi, uko hunhu hwakawanikwa huchawedzerwa.
Tumira Kupikiswa: Sezvinodiwa, iwe uchazoda iyo ESO degree kana yakaenzana nayo uye watove watosvika makore gumi nemasere ekuberekwa. Kune bvunzo, iwe uchafanirwa kupasa bvunzo inonzi yakajairika uye maviri chaiwo, uko psychotechnics zvakare ari protagonists. Mukati memakwikwi aya, isu tichawanawo akasiyana nzvimbo (vakuru, vakuru, kupatsanura, kukanda kana vabatsiri). Uye zvakare, ivo vane Job Bank iyo inokutendera iwe kuti uwane mikana dzakasiyana apo isu takamirira nzvimbo yedu.
Kururamisira kupokana: Mukati mekupokana kweJustice tinowana miviri miviri yakasiyaniswa. Iyo Procedural Management iyo inodiwa diploma kana degree reyunivhesiti, saka isu tine mutumbi weProcedural Processing panodiwa degree reBachelor. Chekupedzisira, mutumbi weJudicial Aid kwaari unoshanda dhigirii reESO kana zvakafanana. Kamwe kupikiswa kwako kukatenderwa unozokwanisa kuwana kukwidziridzwa kwemukati. Basa rinofanira kuitwa rakatosiyana, asi ese anoitwa pakati pevachuchusi nemahofisi ekutonga.
Zvakanakira kuve mushandi wehurumende
Iyo yeruzhinji manejimendi inopa mabasa, ayo ayo vanhu vazhinji vanogadzirira kwemwedzi kana makore. Kuedza kukuru kwakakosha, nekuti kana vanopikisa vapfuura, isu tichava nezvakanaka zvakawanda zvekuve vashandi vehurumende.
Kuchengetedzwa kwenzvimbo yekusingaperi: Basa chikamu chakakosha chehupenyu hwedu. Kutenda kwaari, isu tichakwanisa kuwana muhoro unotibvumidza kugara nehumwe hunyaradzo. Saka kuve mushandi wehurumende kunoratidza kuchengetedzeka. Mwedzi wega wega tinogashira muhoro wedu, pamwe nemari dzinowedzerwazve mbiri gore rega rega. Mundima iyi, kubviswa pamabasa hakuwanzo, nekuti unogona kuenderera mberi uchishanda kusvika wasvika pazera rekurega basa.
Zororo rakakodzera kwazvo: Basa rese rinofanirawo kusanganisira nguva yezororo. Ichokwadi kuti izvi hazviwanzo kuitika, zvinoenderana nerudzi rwebasa. Uye zvakare, muzviitiko zvakawanda mazuva ekuzorora akaderedzwa zvakanyanya. Saka imwe mukana wekuve mushandi wehurumende kuva nemazuva mazhinji ezororo.
Iwo marongero: Ichokwadi kuti iwe unofanirwa kuremekedza akateedzana mashedhiyo, zvese zvekupinda uye kubuda. Asi mune ino kesi, hazviwanzo kuti iwe ugare kwenguva yakareba kupfuura zvaunofanira. Tichiri mune mamwe mabasa mazhinji isu tinomhanya nemhanza yekuudzwa kuti tinofanirwa kupedzisa mamwe marudzi mapepa. Uye zvakare, muhuwandu hwakawanda hwematanga, iwe unenge uine nguva yekuzorora kuti uwane kofi.
Kuvandudza kodzero dzevashandi: Pasina kupokana, kodzero dzemushandi dzine shanduko huru pakati pevashandi vehurumende. Nyaya dzakadai sekurega basa pamwe nemipiro, nezvimwe, zvinogara zvakagadziriswa uye zvinoremekedzwa mapoinzi.
Chinjana makwikwi: Ichokwadi kuti zvakare mukana wakanaka kune ruzhinji rwezvinzvimbo zvinopihwa. Ndokunge, iwe unenge uine kufamba kwenzvimbo, kana uchida. Kunyangwe ichave isiri nemunwe, asi kuburikidza nechikamu chemakwikwi. Zvichida kune vadzidzisi zvakati omei, asi zvinogona kutariswa semukana wakanaka wekutarisa.
Mhando dzekupokana kana Vashandi veveruzhinji pane mana chete, zvinoenderana nezvinodiwa, basa pacharo nenzvimbo.
Basa remukuru: Tinowanzoziva iye semushandi wehurumende. Ndiye munhu akabatanidzwa nePublic Administration. Ndokunge, chinzvimbo chakamisikidzwa mushure mekupfuura kupikisa uye kuwana nzvimbo. Mukati merudzi urwu rwevanoshanda, tinowana chinzvimbo, zvinoenderana nemazita ezvinodiwa kwavari.
Boka a: Boka rekutanga rinogona zvakare kukamurwa kuita A1 uye A2. Zvese mune imwe uye imwe, iwe unozoda degree rekuyunivhesiti kuti ukwanise kunyorera izvi zvinzvimbo.
Boka b: Kuti uwane zvinopesana muBoka B, unoda zita reSuperior Technician.
Boka C: Pano tichawanawo inonzi C1. Mavari degree reBachelor rinodiwa, nepo kuC2, iyo Graduate muESO degree inodiwa.
Kubata vakuru: Kunyangwe zvawakagadzirirawo zvinopesana, zvinopesana nezvapfuura nekuti zvinoshanda havana kudzikama. Ehezve, mashandiro ebasa ravanofanira kuita anozofanana neavo vevakuru vebasa. Asi vadzidzi vanoonekwa kana paine basa rakawandisa kana paine dzimwe nzvimbo dzinofanirwa kuzadzwa kana kutsiva.
Vashandi vevashandi: Vane chibvumirano chinobva kuPublic Administration. Yakanzi kondirakiti inogona kusingaperi, yekusingaperi kana yenguva pfupi
Vashandi venguva pfupi: Mune ino kesi tiri kutaura nezve basa iro rinowanzoitirwa kurairwa uye sekuratidzwa kwezita raro, nderechinguva.
Ini ndoda kudzidza anopikisa, ndotanga sei?
Heano akateedzana matipi ekutanga kudzidza anopikisa uye kwete kufa kuyedza:
Iwe uchagara uchifanira kuseta mamwe yakatarwa maawa ekudzidza. Nekuti maitiro anogara ari hwaro hwekuyera uye wekukurudzira muviri wedu.
Kutanga kudzidza zvishoma nezvishoma. Rangarira kuti kupokana kunotora nguva uye zvirinani kuzvitora zviri nyore kana tichida mhedzisiro yakanaka. Ehezve, mune ino kesi, munhu wese anogona kuseta zvinangwa zvavo. Zvinokurudzirwa kutanga nenguva shoma, maminetsi mashoma asi zvakanyatso kusimbiswa. Kuisa pfungwa nguva dzose ndiyo kiyi yekudzidza kwakanaka.
Nguva dzose yeuka yako chikonzero. Kana iwe wasvika pano, zvinofanirwa kunge zviri nekuti iwe wakazvifunga nezvazvo, iwe wafungisisa nezvezvakanaka zvinhu kuti kana wapfuura kupikisa kuchasiya iwe. Saka kana iwe usinga nzwe sekuda kwayo, gara uchiyeuka kurudziro uye fungidzira icho chinangwa.
Usanetseke kana musoro wenyaya usati wave newe sezvaunotarisira. Nekuti kana iwe ukangotarisa pane ino musoro chete, iwe unotambisa nguva yakawanda uye kukunda. Haisi nyaya dzese dzinofanirwa kuve dzakaomarara, usatsvage zvakawandisa zvechimwe chinhu chine mhinduro.
Iwo anopikisa anoita sekunge raive basa. Ichokwadi kuti pakutanga haibhadharwe, asi isu tinofanirwa kuitora nenzira iyoyo. Usanyanye kukundikana pakutanga shanduko, rongeka uye usanyanya kuguta.
Kune vanhu vanotanga kudzidza anenge maawa matatu pazuva mumwedzi wekutanga. Asi sezvatakaratidza, panogona kunge paine mabhureki, asi nguva zhinji kuwanda. Zvino, mwedzi unotevera, unogona kuwedzera zuva rako rekudzidza.
Nguva nenguva, hazvikuvadze kuita chimwe chinhu mhando yekunyepedzera bvunzo. Nenzira iyi iwe unenge uine kumwe kusangana neizvo zvauchazowana kana zuva guru rasvika, uye iwe uchaedza ruzivo rwako.
Rangarira kuti zvinokurudzirwa kuverenga kutanga, wobva wanyora zvakanyanyisa kukosha uye ita pfupiso kugadzirisa izvo pfungwa.
Zvakaoma here kupasa anopikisa?
Hausi mubvunzo uri nyore kupindura. Kupfuura chero chinhu nekuti mukati mekuoma kunewo akasiyana mapoinzi. Imwe yadzo mhando yekushora kwatinozviratidza, pamwe nematanho ayo mukati meMapoka A, B kana C. Kune rimwe divi, pachave nenguva yatinozvipira, nekuti zvinoda kutsungirira kukuru uye nekushanda. , pamwe nekurongeka.
Kune zvese izvi, zvinofanirwa kutarisirwa mupfungwa kuti vanhu vazhinji vanopedza makore usati wabvumira. Asi zvese ndezvekurega, uchitarisa pachinangwa uye nekuchiendera. Kunyangwe uine nhanho diki, asi iwe unogona nguva dzose. Isu tinowana zvipupuriro zvemarudzi ese, apo vamwe vanopfupikisa kuti zvave zvakaoma, nepo vamwe vasina kuzviwana zvakanyanya sekutsanangurwa. Saka sekutaura kwedu, zvinoenderana nemunhu, maitiro avo ekushanda uye kutsunga kwavo.
Mari yepamutemo inobhadhariswa marii
El muhoro wemukuru Izvo zvinoonekwa neboka rawakashora. Asi pamusoro pezvo, zvimwe zvinhu zvinowedzerwa senge kwairi kuenda kana kureba kwenguva muchinzvimbo. Asi zvinokwanisika iyo mibairo ndeiyi inotevera:
Boka A1: Mubhadharo wako mwedzi wega wega unodarika 2.800 XNUMX euros. Muboka iri mune vaongorori vevashandi, kuchengetedzeka munharaunda, mari kana miviri yepamusoro yeHurumende Administration.
Boka A2: Mune ino kesi muhoro unodonha kusvika ku2.200 euros pamwedzi uye maviri ekuwedzera kubhadhara. Muboka iri, tinogona kuwana technical maofficial ekuongorora, mari kana masisitimu manejimendi, pamwe neruzivo tekinoroji
Boka b: Kana iwe uine Hunyanzvi hwepamusoro hwehunyanzvi, iwe unozokwanisa kuwana iri boka. Kana iri yemubhadharo wake, ichave yakatenderedza 1.800 euros.
Boka C1: Dare rekutungamira rinowanzo kuve riri muboka iri. Kuti ugone kunyorera, iwe uchazoda degree reBachelor. Mubhadharo uri pakati pe1.600 euros.
Boka C2: Pano tichasangana nemubatsiri weboka, icho sechinhu chakakosha chinoda zita reESO. Ivo vanobhadharisa ingangoita mazana gumi nemaviri ema euro.
Boka E: Vashandi vejunior vachange vaine mari inofungidzirwa ye1000 euros.
Chii chinoitika kana ndikakundikana bvunzo kune vanopikisa?
Ichokwadi kuti mushure menguva yese yakashandiswa, kuedza, kuona kuti yakamiswa kunoshungurudza. Nekudaro, isu tinofanirwa kuyedza kugamuchira izvo zvaitika, kunyangwe zvisiri nyore. Mazuva anotevera, zvinokurudzirwa kuzorora uye kunakidzwa. Inguva yekuzvipa isu nguva yekufungisisa uye kukanganwa nezvese zvinhu sezvazvinogona.
Iwe unofanirwa kutarisa kudivi rakanaka. Nekuti zvese izvi ndezvekudzidza uye nguva yega yega tinenge tave padyo nechinangwa chedu. Izvo zvinowedzera zvimwe chiitiko kwenguva inotevera yatinoratidza kumusoro. Zvisinei, misa kuongorora kwevanopikisa, Haisi kuguma. Iyi inzira yekugona kutsvaga izvo zvikanganiso uye nekuvandudza matekiniki ekutora bvunzo inotevera mune imwe tariro nzira.